रोबर्टो सेगुरा। जीवनी र प्रसिद्ध मान्छे | वर्तमान साहित्य
रोबर्टो सेगुरा। जीवनी र प्रसिद्ध व्यक्तिहरु
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | हास्य, साहित्यको इतिहास
रोबर्टो सेगुरा महान मध्ये एक थियो कार्टूनिस्ट डे ला हास्य को स्वर्ण युग स्पेनमा। मैले पहिले नै उल्लेख गरेको छु अर्को लेखमा, तर आज म यो विशेष रूपले तपाइँलाई समर्पित गर्दछु। का निर्माता रिगोबर्टो पिकापोर्ट, ठूलो स्नातक o Alcorcón र आलसी Pepon को प्रभुहरु, उहाँको श्रेय को लागी उहाँसँग धेरै धेरै पात्रहरु छन् हामी एक उमेर हामी मायालु सम्झना छ। त्यहाँ समीक्षा जान्छ।
यो कातालान कार्टूनिस्ट छ Ibáñez, एस्कोबार संगै मेरो कमजोरीहरु मध्ये एक, raf o पुरिता क्याम्पोस। मा जन्मेको Badalona फेब्रुअरी १४, १ 14 २ मा, उनी एक पटकथा लेखक र कार्टूनिस्ट थिए र ५ cartoon कार्टूनिस्टहरुको शानदार पुस्ता को हुन् जसको पौराणिक प्रकाशन घर थियो ब्रुगुएरा। यो त्यो वर्ष हो जब उसले रंग मा आफ्नो पहिलो कभर कोर्दछ र संग श्रृंखला मा माहिर छ परम्परागत पात्रहरु र विषयहरु, जो s० र s० को स्पेनी समाज मा व्यंग्य गर्दा चित्रण। Muchamarcha को, साथीहरु को आफ्नो सामान्य गिरोह को साथ शुरू भएको नवीनतम समय फिटिंग व्याख्या रमाउने गिरोह o गिरोह.
एक प्रारम्भिक व्यवसाय बाट, 14 को उमेर मा उनी पहिले नै मा भर्ना भएको थियो बार्सिलोना कला र शिल्प स्कूल। र त्यहाँ बाट, प्रेस मा केहि सहयोग पछि, उहाँले Macián स्टुडियो, जो कार्टून श्रृंखला को उत्पादन को लागी समर्पित थिए प्रवेश गरे। यो आवश्यक खाली खाली Bruguera, जहाँ उहाँले एक कार्टूनिस्ट को रूप मा स्पेनिश हास्य मा सबै भन्दा राम्रो र सबैभन्दा ठूलो नाम संगै आफ्नो शानदार क्यारियर को विकास गर्न को लागी थियो।
मलाई अझै पनी सबैभन्दा मन पर्ने कुरा de Segura छ, बाहेक स्ट्रोक यति गतिशील र अर्थपूर्ण उनको चित्र मा, महान चित्रण गर्ने क्षमता ती दैनिक परिस्थितिहरु। उदाहरण को लागी, उनको हास्य को परिवार मा एक पहिले नै घनिष्ठ सम्बन्ध थियो, पहिले नै एक धेरै नजिकको लोकतन्त्र मा खुल्नेछ कि समाज को एक प्रतिबिम्ब थियो।
वर्ण र श्रृंखला
रिगोबर्टो पिकापोर्ट, ठूलो स्नातक
Es सायद उसको सबैभन्दा याद गरिएको चरित्र। मा यो सिर्जना गरियो 1957, जहाँ यो पत्रिका मा देखा पर्‍यो Thumbelina। यसको नायक को शर्त को कारण सजीलो स्टेरियोटाइप मा पतन को जोखिम मा, Segura दुबै पात्रहरु र परिस्थितिहरु लाई धेरै विडम्बना संग संपन्न। र जे होस् उहाँ एक शाश्वत हारेको हो, हरेक पटक जब हामी एक Rigoberto हास्य पढ्दछौं हामी सोच्दछौं कि यो समय यो उसको लागी राम्रो संग बाहिर जान्छ। उनको चित्र, मध्यम उमेर को स्नातक को, पहिले नै युवा र बदनाम भन्दा धेरै परिपक्व, उनको विवाह मा उनको दृढता बाट छुईएको छ मंगेतर, Warbler Cencérrez, जो सधैं एक कार्बाइन बाट बोक्नुभयो डोना Abelarda, उसकी आमा। र यसैले, पक्कै, त्यहाँ कुनै बाटो थिएन।
तर सेगुरा, ती सबै पुस्ताका कार्टूनिस्टहरु जस्तै, आफूलाई समर्पित गर्नुपर्‍यो विभिन्न श्रृंखला एकै समयमा दिमाग को एक सानो अधिक शान्ति संग एक जीवित कमाउन को लागी। प्रयासले उनीहरुलाई क व्यापार मा अद्वितीय महारत। र महान युरोपेली स्कूलहरु को स्तर मा, तर कहिल्यै उही अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रतिष्ठा प्राप्त बिना।
Alcorcón र अल्छी पेपेन को प्रभुहरु
मा देखा पर्‍यो 1959 en काका जीवित र उनीहरु लाई धेरै याद छ। यो भन्न सकिन्छ कि उनीहरु अझै फैशन मा छन्, किनकि कोहि छैन वा एक दाजुभाई जस्तै थाहा छैन पेपोन? र यो हो कि Pepón को दुःस्वप्न हो आर्टुरो अल्कोर्कोन, सामाजिक र व्यावसायिक महत्वाकांक्षा संग एक कार्यालय कार्यकर्ता, जो उहाँ संग व्यवहार गर्न को लागी, एक आलसी hobo जो, Arturo को लागी यो माथि गर्न को लागी, उनको बहिनी को सुरक्षा छ, जो उसलाई लापरवाही र overprotects।
द मीरी गिरोह - पाण्डा - लस Muchamarcha's
युवा पाठकहरु को लागी, त्यहाँ साथीहरु को गिरोह र उनीहरुको बचकाना र युवा antics कि Segura वर्ष र सामाजिक परिस्थिति मा विकसित हुन्छ।
Piluca, आधुनिक केटी (१ 1959 XNUMX२) - लिली (1970)
सम्भवतः मेरो मनपर्ने, उनीहरुका रचनाहरु महिला दर्शकहरु कि लिली जस्तै पत्रिकाहरु पढ्ने उद्देश्य थियो। यो समान चरित्र र प्रक्षेपण को दुई केटीहरु को रोमांच र misadventures बताइयो।
अन्य पात्रहरु पनि थिएकप्तान Serafin र उनको केबिन केटा Diabolin o पेपे ब्यारेना वा Laurita Bombón, निर्देशक सचिव।
Segura देहान्त भयो Premià डे मार्च मा, डिसेम्बर मा 2008.
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » हास्य » रोबर्टो सेगुरा। जीवनी र प्रसिद्ध व्यक्तिहरु